ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း, ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစွာ-ဖြစ်လျက်ရှိမှ၎င်း၏ကတိကဝတ်တခုကနိုင်ငံတကာရှေ့ဆောင်တစ်ဖြစ်လာသည်။
ငါ Carioca ရွရွပြေးထံမှအိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပ gyms, ယောဂ, ဘာဝနာနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အာဟာရအကြံပြုချက်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရန်, ရီယိုကြံ့ခိုင်ရေးအစိုးရများ, အပန်းဖြေအကြံပေးချက်များနှင့်နည်းစနစ်ကိုထုတ်လေ၏ LOVE ။ Spas, ဆုတ်ခွာ, ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးပြုစုပျိုးထောင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုသို့အစွန်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုဖြတ်တောက်နေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များဆောင်ခဲ့စူးစမ်းနေကြသည်။
ကနျြးမာရေး, ပြင်ပလူနေမှု, လူမှုရေး
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့မြို့နှင့်ကြောင့် enriches သောယဉ်ကျေးမှုကိုကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသောသဘာဝကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသည်။
ညီ Cariocas ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပုံဖော်, မြို့အတွက် 160 ရပ်ကွက်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပထဝီနှင့်မြို့ပြဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအသီးအသီးကိုကျော်ရှိပါတယ် - အချို့သောခရိုင်အိမ်ပြန်အံ့မခန်းကမ်းခြေရှိနေစဉ်, မြို့၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ atlantic မိုးသစ်တော, မှတ်တိုင်ဗိသုကာပညာ, သို့မဟုတ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြို့တော်ကိုဥယျာဉ်များ ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကြီး, ကမ်းခြေတွေ, သစ်တောများနှင့်ရေကန်များနှင့်မတူကွဲပြားမှုအစဉ်အလာကိုပြန်ဌာနေလူမျိုး tracing နှင့် Cariocas တစ်တထောင်နည်းလမ်းတွေထဲမှာမြို့တော်ကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုခြင်း, အာဖရိကန်နှင့်ဥရောပရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုင်စွဲဖို့ကျယ်ပြန့် spanning နှင့်အတူ entwine ။
တစ်ဦး၌ထားကြ၏-ကျောနဲ့စိတ်အေးလက်အေးပြင်ပတွင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့လောကီသားတို့သည်အကျော်ကြား image ကို ကျော်လွန်. , Carioca လူနေမှုလူဦးရေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအမြစ်များကိုနက်ရောက်ရှိဖို့နဲ့အခြားရှုထောင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်တို့ပါဝင်သည်, အစဉ်အမြဲချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်မြို့ရဲ့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်အတူနှင့်ဘရာဇီး၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲ။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့သဘာဝရှုခင်းများ၏အံ့ဩဘွယ်အခင်းကျင်းနှင့် delightfully ပူနွေးသောရာသီဥတုကြောင့်ကောင်းစွာအဖြစ်အလှနျလူမှုရေးသဘောသဘာဝ, အိမ်ပြင်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနှင့်မြို့၏ဂုဏ်အသရေနှင့်အခြားသူများ၏သာယာသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှဒေသခံများကသွေးဆောင် - ထူးခြားတဲ့လူပေါင်းကောင်းသောတစ်ဦးကကြေညာချက်နှင့် Cariocas ၏ဖော်ရွေ။
အားလုံးလှုပ်ရှားမှုများမှ common, အိမ်ပြင်များအတွက်အတိအကျ propensity နှင့်အတူအားလုံး၎င်း၏ရှုထောငျ့များအတွက်လူမှုဆက်ဆံရေးအပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အလေးပေးနှင့်အသက်၏စစ်မှန်သောခံစားဖို့နဲ့တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပွငျကြီးမားတဲ့မြို့တော်ကိုပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်အရာအားလုံးကိုရန်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလွတ်သဘောပြင်ပတွင်လှုပ်ရှားမှုများ, ကျန်းမာလူနေမှု၏ရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခရောနှောလည်းပါဝင်သည်နှင့်လူမှုရေးစုဝေး, အားကစားလေ့အကျင့်, ဒီလိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်စွန်ပျံအဖြစ်ချစ်စရာကောင်း pastime ပိုမို။
မိမိတို့အကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးများအတွက် penchant နှင့်အတူလူဦးရေရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်အတွက်အစိုးရကဖြစ်ရပ်များ, ပြိုင်ပွဲနှင့်အပန်းဖြေနေရာများနှင့်အရင်းအမြစ်များ၏ဖန်တီးမှုမှတဆင့်မြို့တော်ကိုဖြတ်ပြီးကြံ့ခိုင်ရေးလေ့အကငျြ့ထောက်ခံတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
အများအပြားကပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်းမြို့သားတက်ကြွစွာနှင့်ပြင်ပတွင်သဘာဝမှဖြည့်ဆည်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးတိုးတက်ရန်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန်သင်တန်းတွေနှင့်လှုပ်ရှားမှုများရာပူဇော်သက္ကာကိုတစ်လှည့်ဖျား Carioca ပေးကမ်းနေစဉ်နောက်ဆုံးပေါ်ကမ္ဘာ့အခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်စောင့်သောအားဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ကြည့်ရှုပါ။
သဘာဝတရားကကိုတိုက်ရိုက် ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပေါ်သက်ရောက်မှု - မြို့ရဲ့လူဦးရေရဲ့တစ်ဦးအထင်ကြီးသောအဘို့ကိုကသူတို့ရဲ့သဘာဝကပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နှင့် ပတ်သက်. အသည်းအသန်သည်: မြို့ပြနေတဲ့ကမ်းခြေတွေ, ပင်လယ်ဘက်ဂွ, သဘာဝဥယျာဉ်များ, ဥယျာဉ်များ, သစ်တောများနှင့်ကျောက်တောင်တောင်တမူထူးခြားတဲ့ဌန်။
ပူနွေးသောရာသီဥတုကိုအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကစားခြင်း, အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး Recreational အားလုံး ပို. နှစ်သက်ဖွယ်နှင့်တစ်စက်ဘီးစီး Cariocas ပွေး၏ဗိုလ်ခြေများရှာဖွေနိုင်သည်ရှိသမျှပန်းခြံနှင့်ကမ်းခြေမှာစေသည်။
မြို့သူမြို့သားနေထိုင်သူများနှင့်ဧည့်သည်များမှန်မှန်ပတ်လည်ရှိမြို့သူမြို့သားစိတ်လှုပ်ရှားအမြင်များကိုခံစားဖို့တောအုပ်နှင့်ပွင့်ကျောက်တုံးများကိုဖြတ်ပြီးဆက်ပြော, ထထိုကဲ့သို့သော '' parque da tijuca '' ဒါမှမဟုတ် '' parque da pedra branca '' အဖြစ်ကြီးစွာသောမြို့ပြဥယျာဉ်များကြွယ်ဝသောတောင်ကုန်းသို့လေ့လာရေးခရီးလုပ် အောက်။
ရေကူး, သင်္ဘောသားနှင့် surfers နှစ်ခုအ bays နှင့်ပင်လယ်ရေသည်သှားရောကျနထေိုစဉ် Long ကစက်ဘီးစီး, ထိုကဲ့သို့သောနာမည်ကြီး '' lagoa Rodrigo က de Freitas 'သို့မဟုတ်ကမ်းခြေ၏ဒါဇင်တလျှောက်အတိုင်းအများအပြားမြို့ပြဂွပတ်ပတ်လည်ကိုယူကြသည်။
ငါးဖမ်းသမား line ကိုအများဆုံးကမ်းရိုးတန်းဆဘောလုံးကွင်း, ဘော်လီဘောနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုပူနွေးအိမ်ပြင်အတွက်သဲပို်အပေါ်ကောက်ယူကြသည်။
နေထွက်မှာစတင်ခြင်းနှင့်နေဝင်ချိန်ပြီးနောက်ကောင်းစွာဆက်လက်, မြို့ရှိသမျှတို့ကို၎င်းရဲ့အဓိကကမ်းခြေအိမ်ပြန်ကစားရန်အသင်းများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်စုဆောင်းလူများနှင့် excercise ဖြစ်ကြ၏ - သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ကို၏အစောပိုင်းနာ​​ရီကြာပျော်မွေ့သလောက်, များစွာသောပြီးနောက်ကျောင်းအဖွဲ့အစည်းများကဘောလုံးဆုံးမသွန်သင် နှင့်အသက်အရွယ်အမြိုးသားမှဘောလုံးကို volley ။
ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအတော်များများမှာထံမှအားကစားနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကြိုဆိုခြင်း, ယောဂဒီနေ့ခေတ်ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နှင့်လူကြိုက်များသင်တန်းတွေများအတွက်အများဆုံးအာဟာရလှုပ်ရှားမှုများများထဲမှရီယိုကိုဖြတ်ပြီး gyms, ကမ်းခြေများနှင့်ပန်းခြံမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်စဉ်းစားသည် - ကျွမ်းကျင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဘဲ၎င်း၏ပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူနှင့်အေးချမ်းမှုကို ဘာဝနာကြောင့်ယခုကပင်ရေအားဖြင့်ဝိုင်းရံ floating Stand-တက်လှိုင်းပျဉ်ပြားအပေါ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည်။
အများအပြားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခရီးဝေးအလုပ်ဆင်းအားကစားမတ်မတ်မှာသူတို့ရဲ့ရုံးတည်နေရာအရနိုင်အောင်နက်နဲရာသဘာဝမှ connection ကို, ကျန်းမာရေးနှင့်အပြည့်အဝဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့ဆန္ဒသူတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်အလုပ်ထွက်ထည့်သွင်းနှင့်တစ်ဦးလိုအပ်ချက်ထဲကအကောင်းဆုံးကိုအောင်ပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပူနွေးသည့်ရာသီဥတုပြင်ပတွင်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများဆိုလိုသည် - Cariocas ပုံမှန်အားဖြင့်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်အားကစားပွဲများအဘို့, သို့မဟုတ်၏ဝိသေသရက်သတ္တပတ်-အဆုံးအကင်ဆိုင်တွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, လူသစ်နှင့်နေရာတွေကိုသူတို့ကိုထူးခြားပွင့်လင်းအောင်, ရင်ပြင်, အရက်ဆိုင်, ပန်းခြံများနှင့်ကမ်းခြေ၌, အိမ်ပြင်ကိုစုသိမ်း အများဆုံး Carioca မိသားစုများ။
အိမ်ပြင်နှင့်အတူဤဆှဖှေဲ့ရာသီဥတုကတစ်ဦးအားကြီးသောအသိပညာပေးစို့ဖြစ်ပါတယ် - အများအပြား Cariocas တိမ်နှင့်မိုဃ်းကိုရွာစေချဉ်းကပ်နေကြတယ်လျှင်အထင်ကြီးတိကျစွာနှင့်အတူကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြသည်။
လူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အကျင့်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်သဘာဝနှင့်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး connection ကိုတစ်ခုချင်းစီမှကိုအခြားသို့ပေါင်းစည်း - အကျိုးသက်ရောက်မှုအပန်းဖြေငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းထဲကနေဂီတခံစားဖို့နဲ့အနုပညာပွဲတော်များအထိလှုပ်ရှားမှုများအတွက်နည်းလမ်းများစွာအများဆုံးကွဲပြားခြားနားတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အမွေအနှစ်မြို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်း, နှင့်၎င်း၏နေထိုင်သူများကြောင့်ပျော်မွေ့လမ်းကိုနှစ်ဦးစလုံး shaped ဖြစ်ပါတယ် - ဂီတတစ်ခုစန်းကနေတဆင့်ကျပန်းကမ်းခြေရက်ပေါင်းသလောက်မြို့တော်ကို-sponsored ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲ, ဘာသာရေးပွဲတော်များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာ, မြို့ဘဝကိုများစွာကိုရှုထောင့်ထဲမှာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည် အဆိုပါသဲပေါ်မှာ -box ။
လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာကိုဒေသခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည် - အပတ်စဉ် Carioca လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုချစ်စရာကောင်းနှင့်ကာလကြာရှည် feature ကိုဖောက်သည်များတို့သည်မိမိတို့ပြည်၏ထွက်ကုန်များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဘယ်မှာဒေသခံတစ်ဦးတရားမျှတမှာအစားအသောက်ဆိုင်အဘို့စျေးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခပ်သိမ်းသောရပ်ကွက်အတွင်းဖောက်သည်များအတန်းမှာ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဈေးနှုန်းများမှာအလွန်အကောင်းဆုံးသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းအရသာနမူနာမြည်းစမ်းနှင့်အခြားဒေသခံများနှင့်ကုန်သည်နှင့်အတူရွှင်ပြလန်းဆန်း chatting တလျှောက် amble ဘယ်မှာအနညျးဆုံးတစျအပတ်စဉ်အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စျေးကွက်ရှိတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုလည်းဝိသေသ Carioca syncretism ကဆုံးဖြတ်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြီ - တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေ, အလေ့အထများနှင့်အစားအစာများကိုဥရောပအခြေချနေထိုင်သူများနှင့်အာဖရိက-ဘရာဇီးလူဦးရေတာများမှအနေအချို့က pastime ပြန်အစောပိုင်းတွင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုမှယနေ့အထိ။
ကို 'capoeira' '၏အရေးကြီးသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာနှင့်အများအပြားဝိညာဉ်ရေးရာဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုအာဖရိကန်အစဉ်အလာမှာသူတို့ရဲ့မူလအစရှိနေစဉ်ငါးဖမ်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း, ဘရာဇီး၏ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ရှေ့မှာကတည်းကတည်ရှိပါပြီ။
အလားတူပဲ, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအမျိုးမျိုးအတွက်အမြစ်များနှင့်အတူအစဉ်အလာအမျိုးသားရေးအစားအစာမှာများစွာသောစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးပညာရေးဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ခေတ်မီအခြေခံအဆောက်အအုံများကျန်းမာစေကြောင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးမှာဒါရိုက်တာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း - အဆိုပါအစိုးရတက်ကြွစွာဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ Cariocas '' ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးလွယ်ကူချောမွေ့၌၎င်း, ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြောင်းသေချာအတွက်ပါဝင်နေသည်။
လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာစားသုံးမှုအပါအဝင်အများအပြား concurring အချက်များစွာ၏ရလဒ်သည်အတိုင်း, နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏စားရန်အဘယ်အရာအပေါ်ပညာရှိအကြံပေးခြင်း, ဟင်းလျာများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးကြောင့်ခံစားဖို့ရာပူဇော်သက္ကာကို, အစားအသောက်လမ်းညွှန်ချက်များအစုတခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Carioca တစ်အုတ်မြစ်, အစားအသောက်နှင့်ကျန်းမာသောလူနေမှုနှင့်အတူဤဆန်းသစ်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုမရအောင်ဆက်စပ်နေသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ - အလမ်းညွှန်ချက်များအတူတကွအစားအစာချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့, သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများများအသုံးပြုခြင်း, စက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့၏ရှောင်ရှားခြင်း, နှင့်မိသားစုများကိုဝယ်ယူရန်အဘယ်မှာရှိ shared အချက်အပြုတ်ယဉ်ကျေးမှု, ၏စိုက်ပျိုးမှုထောက်ခံ လူနေမှုပုံစံစတဲ့။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဆိုသလိုအားလုံး Cariocas မှလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကသဘာဝနေရာများနှင့်လူလုပ်အဆောက်အဦများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုအလေးပေးသော, ကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများအဖြစ်အခမဲ့ပြင်ပတွင် gyms နှင့်မြို့အနှံ့ကျယ်ပြန့်-စကေးပြိုင်ပွဲနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးကူညီပံ့ပိုး။
အထင်ကြီးမြို့တော်ကို-ကျယ်ပြန့်စက်ဘီးသွားရာလမ်း၌အများပြည်သူနေရာများမှဝင်ရောက်ခွင့်ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမြှင့်တင်ရန်, built အဖြစ်အသစ်သောစကိတ်စီးပန်းခြံပြီ - အရှိဆုံးကမ်းခြေ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ဖြစ်ပါသည်တမြို့အနှံ့အများအပြားခရိုင်ရှိနေစဉ်, သုံးစွဲဖို့အခမဲ့သေးငယ်တဲ့ gyms တပ်ဆင်ထားကြသည် သက်ကြီးရွယ်အိုများများအတွက်အများပိုင်နှင့်ခေတ်မီသော Open-လေကြောင်းရန် gyms နေရာဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနောက်ထပ်တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နေရာတွေနဲ့များ၏ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးမြှင့်တင်ရန်, ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အနှံ့ကအလွန်ကိုအလွယ်တကူငှားရမ်းထားသောနဲ့ off ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်ရရှိနိုင်သောအများပြည်သူစက်ဘီးရာ၌ခန့်ထားပြီ, မြို့-sponsored စက်ဘီးလမ်းမှဖြည့်စွက်။
လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏တစ်အရေအတွက်ကိုဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှဖို့ Cariocas '' အလိုဆန္ဒ၏သတိပြုမိသင်တန်းတွေနဲ့အုပ်စုကိုလှုပ်ရှားမှုများ, ကိုဆက်ကပ်။
အကအခုန်, ဂီတ, ချက်ပြုတ်, စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာနှင့် surfing သင်ခန်းစာတွေသူဌေးများနှင့်တက်ကြွသမိုင်းကိုသို့နှိပ်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး repertoire မှဖြည့်စွက်၏တစ်လမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
ကမ္ဘာအနှံ့ကနေအလေ့အကျင့်ဟာသူ့ရဲ့အစဉ်အမြဲဝင်ရောက်လာမှုနဲ့အတူဒွန်တွဲမြို့တော်ရဲ့ resplendent သဘာဝအရာပူဇော်သက္ကာ, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အအထောက်အထားတွေကို၏ကြွယ်ဝ၎င်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီ အားလုံးအသက်အဘို့မေတ္တာနှင့်အခြားသူများ၏အရေးပါမှုကိုအောင်ပွဲခံကြောင်း, ထင်ရသောကွဲပြားခြားနားသောနေစဉ်, Carioca နေထိုင်မှုဓလေ့များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုခွင့်ပြု။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Carioca အလေ့အထများ, အလေ့အထများနှင့်အရသာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပြသကြသည်။
တက်တူး၏သမိုင်းအဓိပ်ပာယျ မှစ. , သဘောထားများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အားလပ်ရက်ယဉ်ကျေးမှု, ဘယ်နေရာမှာတစ်ဦး၏ဆံပင်ညှပ်ရသို့မဟုတ်တစ်အလှတရားကုသမှုများအတွက်သွားကြဖို့, နှင့်နေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်၏ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းများကိုရန်, ငါရီယိုဇယားကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းပေါ်ပြူလာသဘောထားတွေ LOVE Carioca ဘဝကို၏နေ့လုပ်-up ကနေ့။